Inona ny fanasokajiana ny lamba?
Inona ny fanasokajiana ny lamba? Ilay antsoina hoe lamba dia manondro ireo zavatra vita amin'ny lamba vita amin'ny kofehy lamba. Ny lamba ankapobeny dia azo sokajiana araky ny fampiasa sy ny fomba famokarana. Araka ny tanjon'ny f ...
Inona no atao hoe siansa lamba?
Inona no atao hoe siansa lamba? Amin'ny maha-siansa teknika azy, ny lamba dia mianatra ny fomba mekanika (ara-batana, mekanika) ary simika ampiasaina amin'ny fanangonana sy fanodinana fibre. Ny olona honina, ny voalohany hihinana, ny faharoa mitafy. Hatramin'ny taloha ...
Karazan-damba inona avy no ampiasaina amin'ny fanaka? Araka ny lamba samy hafa dia azo zaraina ho hoditra, hoditra artifisialy, lamba sns ny fanaka vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny hoditra ...